Amabala okupenda kwiingubo. Ungasusa njani amacwecwe epeyinti kwintsimbi ekhaya?
Kunokuba ususe ipende kwiingubo kwiimeko zezindlu?
Iingcebiso zokucoca iimpahla kwiipatheni zokupenda
Ingxaki ngesimo senqatha into endiyithandayo ayinakukuvuyisa kakhulu. Kwaye ungangcola naluphi na uhlobo olufunayo, ukususela ekulungiseni, nokuphelisa ivenkile. Umbuzo uvela, indlela yokususa ipende, kuba into ebaluleke kakhulu ayinakuphazamisa into ebiza. Ixesha lokunika iingcebiso malunga nokucoca iimpahla ekhaya.
Ngaphambi kokuba ususe ibala kwi-jacket phantsi, kufuneka uqwalasele iimeko ezininzi apha:
Musa ukulibazisa inkqubo yokucoca ipeyin ixesha elide. Kungekudala isiphene siyavela, imizila engaphantsi iya kuhlala kwisitya. Umzila omeleyo udliwe kwisitya njengemitha, kwaye kuya kunzima ukuyihlamba ngeendlela eziqhelekileyo.
Ngokuxhomekeke kwimibala yombala, indlela yokuchithwa kwendawo ikhethiweyo. Imipu iyahlanjululwa ngamanzi aqhelekileyo, ngelixa iinzima zifuna ukusebenzisa i-solvent.
Ukuba unquma ukuzisa ingxaki ekhaya, qalisa inkqubo ukusuka kwicala elingalunganga. Isiponji esinamanzi okanye umfesane onobukhulu ubeka phambi kwengubo. Njengoko iphosakelo epholileyo ikhutshiwe, iya kuthatha umswakama obuninzi.
Ungasusa njani umbala ukusuka kwikotoni kunye nengubo yelikalika?
Iingubo zesikotini yinto enobunqabileyo. Xa ususa amathanga kwipende, kusetyenziswe umbane okhethekileyo. Indlela yokulungiselela:
ukulungiselela ipeniti ye-enamel ngamanzi acacileyo;
engeza i-1 ithispoon ye-soda kunye nesepha yokuhlamba kunye neendawo ezicwangcisiweyo;
Gcoba iziqwenga zambatho kunye namacwecwe kwi-container imizuzu embalwa.
Ukufumana ulwazi: Ukuba ufumana umtshato, hlamba ilinen endala emanzini afudumele nge-bleach.
Xa uhlambulula isilikhi yendalo, kufuneka ugcine imeko esemgangathweni - akukho likhemikhali kunye ne-solvents! Umgaqo wokusebenza uya kuba ngale ndlela:
Lungiselela insipho yokuhlamba kwaye uyihlambe kwingingqi yengxaki;
Ngexa i-sophi ibanjwe, lungiselela uhlambe lwamanzi;
Thatha utywala obunxilisayo uze uwutshise (kodwa ungabi ngamathumba);
Gxobhoza isiponongo kwindawo yotywala kwaye uhambe kuyo kuloo ndawo yembatho, apho kukho i-staap stain.
Emva kokususa ingxaki kwijacket ephantsi, phatha indawo nge-swab kunye ne-talcum powder.
Isisombululo sekhaya ukususa amanqatha eoli
Izinto ze-Woolen azidingi indlela ekhethekileyo, ngoko unokukwenza kunye nesepha yasekhaya kunye namanzi ashushu. Ipeyinti ye-nitro isuswe kwisitya ngokusondeza nje indawo yengubo. Emva koko, kubalulekile ukucwilisa into yeboya emanzini atshisayo kude kube yinkxalabo isuswe ngokupheleleyo. Umgca wokugqiba uhlamba emanzini afudumeleyo. Izithako ezongezelelweyo ezinceda ukususa upende lweoli:
I-gasoline okanye ilula. Isisombululo esihle kakhulu sokususa amadala endala kwipende yomoya omhlophe. Xa usebenzisa i-petroli, kufuneka uhlanjululwe kuphela umbane, njengesiqhelekileyo ushiya amanqatha amanqatha kwiingubo.
Ioli e vuno. Kwanele ukuphatha ityala nge-tampon ngeoli yemifuno ukuhlamba upende ngaphandle kwemiphumo. Imeko ephambili yale nkqubo kukuba ubeke ilinen ecocekileyo phantsi kwendawo ephathwayo.
Utywala notyuwa. Indlela yasekhaya, onokuyihlamba ngayo upende ngeyiloni okanye into yeyiloni ukuza kutshintshela utshwala obufudumele, obufuna ukususa i-oil stain stain. Emva koko, ubunzima obuqinileyo buhla kwi-jacket ngoncedo lwesisombululo se-saline.
Khumbula imeko esemgangathweni - nokuba inxalenye efa kakhulu yopende ingasuswa ekhaya. Kodwa kungcono ukuba ungaqalanga inkqubo kwaye ususe ingxaki ngosuku olufanayo xa isalathisi sabekwe kwinqweba.
Isigaba sokugqibela sokucoca iingubo ezivela kumathambo
I-nitrocellulose isuswe kwisitya ingashiya umkhondo ongenakuqondakala, ngoko kufuneka uhlambele into emanzini afudumele kwaye uyixhome ukuze uyomile. Khumbula ukuba emva kokuba uqhube i jacket idinga umoya omtsha. Ipeyinti ye-nitro ibukeka kakuhle kwiiyure ezimbalwa. Qaphela: qiniseka ukuba uyomisa ijacket ephantsi - ngoko uya kubulala iintaka ezimbini ngelitye elinye: zixhamle kwi-smell ye-solvent kwaye ziphelise i-bacterial fungal. Ngaloo ndlela, upende uhlanjululwa kwizinto zakudala, kungekhona ekucocweni komileyo, kodwa nasekhaya. Kodwa kungcono ukuba ungavumeli ukubunjwa kweempazamo zombala kwintsimbi.
Indlela yokukhetha iikhredithi zokudweba
Ungayilahla njani iphunga le-urine yekati?
Ukugcina ibhajethi yakho yasekhaya, iingcebiso
Imithetho eyi-10 yomfazi wesigodlo
Ungayi kubuyiselwa njani ngomsebenzi wokuhlala
Indlela yokuzolalisa inkqubo yesantya
Indlela yokunyamekela ifenitshala yomthi
Efanelekileyo ukusuka "A" ukuya "I": entsha isikhwama se-A-Bag evela kuMaha Mara
I-Snack kwi-cod yesibindi
Esi siqwenga sesidenge sixazululwa kuphela yi-savvy. Impendulo inentsingiselo enzulu
Recipe Mousse Recipe
Iintlanzi ezibomvu zentlanzi
Ubudlelwane bezesondo ngexesha lobudala
Amathambo Okunakekelwa Kwamathambo
UVincent Cassel: Musa ukuzalwa mhle
Imveliso yokunakekelwa kweLil